२०७४ वैशाख १७ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
पानी पीडामा मानवबस्ती, तराई प्रभावित हुने सक्ने
प्रस, निजगढ, १६ वैशाख/ विगत केही वर्षदेखि अधिकांश चुरे बस्ती पानी पीडाको समस्या भोग्दै आइरहेको छ। चैत, वैशाख, जेठ महिनामा सुक्खायामको कारण यहाँका अधिकांश मानवबस्ती चरम पानी पीडामा पर्दै आइरहेका छन्। असार, साउनमा बस्ती नै बगाउलाभैंm उर्लने खोला, खहरेहरू हालका दिनमा सुकेका छन्। चुरे भएर बग्ने बारास्थित दुधौरा, चुरिया, पसाहा, खयर, टिकुली, भालु, बकैया र धन्सार खोला आदिमा रहलपहलबाहेक अहिले पानी छैन। भएका पानी पनि खेतबारीमा सिंचाई गर्ने गरेपछि खोलाबगर यतिखेर मरुभूमिमा परिणत भएका छन्। बढ्दो चुरे क्षेत्र उजाड, वनजङ्गल विनाशले चुरेको मूल मुहान सुक्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। एक दशकअघिबाट जथाभावी चुरे फेद, वन क्षेत्र, बस्तीनजिक चलेका दुई दर्जनभन्दा बढी क्रसरले प्राकृतिक स्रोत साधन जथाभावी उत्खनन गरेकाले पनि पानीको स्रोतमा सङ्कक पैदा भएको हो। नदीजन्य वस्तु खोलाबगरबाट जथाभावी उत्खनन गर्ने र प्रदूषण पैmलाउने गर्दा एकातिर अप्राकृतिकरूपमा स्रोत साधनको उत्खनन, दोहन भएको छ भने अर्कोतिर धूलोले वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ । चार वर्षयताबाट चुरे आसपास रतनपुरी र चुरे फेद भरतगंजसिगौंलम
तस्करसँग मिलेमतोको आरोपमा बारा प्रहरीका चारजना निलम्बित
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले चारजना प्रहरीलाई निलम्बन गरेको छ । बाराबाट हुने तस्करीमा चार प्रहरीको संलग्नता देखिएकाले उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले विज्ञप्तिमार्पmत् जानकारी गराएको छ। तस्करसँग सम्पर्क, सम्बन्ध भएको पाइएको भन्दै पदीय दायित्व वहन नगरी प्रहरी आचरणविरुद्ध काम गरेको कसूरमा प्रहरी हवलदार नथुनी साह कानुसहित प्रहरी जवानहरू प्रमोदकुमार कम्कर, सञ्जीवकुमार पासवान र रमेशकुमार झालाई जिप्रका बाराले निलम्बित गरेको जनाइएको छ। निलम्बन गरी निजहरूविरुद्ध कारबाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सो कार्यालयले जानकारी गराएको छ। बारा जिल्लामा केही महिनायता तस्करीका घटनामा वृद्धि भएको छ र बेलाबखत प्रहरीसँग तस्करको मुठभेड पनि भएका खबरहरू आइरहेका बेला जिप्रका बाराले चारजना प्रहरीलाई निलम्बन गरी कारबाई अगाडि बढाएको हो। केही दिनअघि मात्र तस्कर समूहले प्रहरीमाथि हमला गरी सटगन लुटेको थियो। प्रहरीको संलग्नतामा बाराको भारतसँग जोडिएको उत्तरी भागमा संस्थागत तस्करी भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। तस्करहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरी सटगन लुटेको र पछि बराम
निजी विद्यालयद्वारा पाठ्यक्रममैं दर्ता नभएको पुस्तक पढाइँदै
प्रस, परवानीपुर, १६ वैशाख/ प्याब्सन, पर्सामा आबद्ध केही निजी विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा दर्ता नभएका पुस्तकहरू पनि अध्यापन गराइरहेका समाचार प्राप्त भएको छ। प्याब्सनसँग आबद्ध गौतम, मनकामना, विद्यासदन, माउन्ट हर्मन, सनराइज, मास्कोटलगायतका विद्यालयमा भारतीय प्रकाशन फ्रेङ्कको ग्रोविद ग्रामर, म्याकमिलन प्रकाशनको लिटिल रिडर्स नामक पुस्तकहरू अध्यापन गराउँदा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा थप भार परेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाली प्रकाशन र नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा दर्ता भएका पुस्तक मात्र पढाउनुपर्ने नेपालको शिक्ष्Fा नीति रहेको छ तर यी विद्यालयहरूले पुस्तकमा कमिसनको चलखेलले जबरजस्ती विद्यार्थी र अभिभावकमाथि भार थोपरेको गुनासो छ। यस विषयमा पुस्तक तथा स्टेसनरी महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष नरेश रौनियारले भारतीय प्रकाशनका यी पुस्तकहरू वीरगंजका विद्यालयमा लागू भएपछि यहाँका पुस्तक व्यवसायीलाई पनि समस्या परेको बताएका छन्। नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा दर्ता नभई प्याब्सनसँग आबद्ध विद्यालयहरूमा कसरी भारतीय प्रकाशनको पुस्तक लागू भयो भन्ने सन्दर्भमा प्याब्स
जीतपुर–सिमरा उपमनपामा सरोकारवालाबीच अन्तर्क्रिया
प्रस, जीतपुर, १६ वैशाख/ इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रनि गोविन्दकुमार कार्कीले सबै सरोकारवाला आआप्mनो पेशाप्रति जिम्मेवार भएमा सबै पक्ष्Fको कल्याण हुने बताए। बारा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जीतपुर–सिमरा उपमनपा समिति जीतपुरका अध्यक्ष घनश्याम गिरीद्वारा आयोजित सवारी दुर्घटना तथा अपराध नियन्त्रणसहित लामखुट्टे मार्ने विषयक अन्तत्र्रिmयामा प्रनि कार्कीले एकअर्का समुदाय, सरोकारवालाबीच सहकार्य, सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। अध्यक्ष गिरीले जीतपुर सडक, बजार, बस्तीमा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भई जनधनको क्षतिमा वृद्धि भएको बताए । उनले लामखुट्टेको बिगबिगीले बजार बस्तीको जनजीवन प्रभावित भएको बताउँदै सोको नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तत्र्रिmयामा सवारी दुर्घटना नियन्त्रण तथा शान्तिसुरक्ष्Fाको लागि स्थानीय ट्राफिक र जनपद प्रहरीले ट्राफिक जाम, सडक अवरुद्धलाई ध्यान दिएर खाली गराउनुपर्ने, आवश्यकता बमोजिम दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने, जनचेतनामूलक शिक्ष्Fा र नियमितरूपमा गस्ती, निगरानी गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिए । कार्यक्रममा इप्रका जीतपुरका प्रनानि जयकिशुन राउत
श्रम कार्यालयद्वारा प्रभातफेरी
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ श्रम कार्यालय वीरगंजको आयोजनामा ‘व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाऔं’ मूल नारासहित शनिवार प्रभातफेरी निकालिएको थियो। घण्टाघरबाट निस्केको ¥याली नगरपरिक्रमा गर्दै श्रम कार्यालय वीरगंजमा पुगी सम्पन्न भएको थियो। १७औं राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सप्ताह २०७४ को अवसरमा श्रम कार्यालयले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यालय प्रमुख राधेश्याम झाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न मजदुर सङ्गठनहरूको सहभागिता थियो।
ट्याक्टरको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ महेन्द्रपथ अन्तर्गत झौवागुठीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। शनिवार राति ८ बजे ना. ४ त २६७० नं.को ट्याक्टरले सोही दिशाबाट मोटरसाइकलमा गइरहेका बारा, इनर्वासिराका २० वर्षीय प्रह्लाद साह कानूलाई ठक्कर दिंदा कानूको घटनास्थलमा मृत्यु भएको नाउक्षे प्रहरी बिटले जनाएको छ।
प्रस, परवानीपुर, १६ वैशाख/ विशाल मेमोरियल फाउन्डेसन वीरगंजद्वारा वीरगंजको नारायणी रङ्गशालामा आयोजित प्रथम विशाल मेमोरियल गोल्डकपको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौंले जितेको छ। शनिवार आयोजित फाइनल खेलमा आर्मीले दुई गोलअन्तरले सिएमजी क्लब सङ्कटालाई पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो। आर्मीले उपाधि जितेसँगै प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार नगद रु. ५ लाख पनि प्राप्त गरेको छ। उपविजेता सङ्कटाले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। फाइनल खेलमा आर्मीले निर्णायक दुई गोल दोस्रो मध्याह्नमा गरेको थियो । दुईवटै गोल आर्मीका जर्सी नं. ३० का जर्ज प्रिन्स कार्कीले गर्दै फाइनल खेलको म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। पहिलो गोल दोस्रो मध्याह्नको २२औं मिनेटमा आर्मीका जर्सी नं. १४ का सन्तोष तामाड्ढो पासमा कार्कीले हेड गर्दै बललाई जाली चुमाए। दोस्रो गोलमा आर्मीका जर्सी नं. १० का आर्मीका क्याप्टेन भरत खवासले दिएको पासलाई कार्कीले आक्रामक गोलमा परिणत गरेका थिए। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी सङ्कटाका राज पौडेल घोषणा भए। उनले पुरस्कारास्वरूप सुजुकी डिक्सर मोटरसाइकल पाए। त्यसैगरी, प्रतियोगिताको उत्कृष
शब्दमा सीमित समृद्धि
ओमप्रकाश खनाल अहिले राजनीतिक दलहरूले विकासका तानबानासहितका घोषणा सार्वजनिक गर्ने क्रम उत्कर्षमा छ। घोषणाका शब्दावली हेर्दा यस्तो लाग्छ, यिनीहरू विकास र त्यसको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन आतुरमा होइन व्यग्र छन्। कसले कसकोभन्दा राम्रो घोषणाको दस्तावेज तयार पार्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। तर विगतमा पनि आर्थिक विकासका यस्ता शब्दजालहरू बुनिएकै हुन्। यस्ता शाब्दिक चलाखी मत तान्ने औजार मात्र बने, यसलाई जनताको अपेक्षा सम्बोधनको मार्गदर्शन बनाउन आवश्यक ठानिएन। यतिखेर शब्दहरूमा समेटिएको तत्परता पनि विगतको पुनरावृत्ति मात्र होइन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने कारण छैन। विकास सबैको साझा अपेक्षा भएपनि यथार्थमा यसको पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारका पक्षमा अपेक्षित तत्परता देखिन्न। आर्थिक विकासका सन्दर्भमा सतहमा देखिएका बहस र मन्थनलाई हेर्दा यो विषय केवल निजी क्षेत्रको चासो मात्र हो कि जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर आर्थिक विकासका आयामहरूको अग्रभागमा निजी क्षेत्र देखिए पनि यसको आवश्यकता औसत दैनिकीसित जोडिएको छ। जनताको नाममा राजनीति गर्ने तप्का भने यो आवश्यकताको आपूर्तिमा अस्वाभ
२०७४ वैशाख १६ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा पुस्तकको चरम अभाव, पठनपाठन प्रभावित
प्रस, परवानीपुर, १५ वैशाख/ नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई साता बित्दा पनि पठनपाठनको लागि सहज पुस्तक उपलब्ध हुन सकेको छैन । माग बमोजिम पुस्तक उपलब्ध नहुँदा हजारौं विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको पर्साका सरकारी तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले गुनासो गरेका छन्। गीता गजेन्द्रराज जोशी माध्यमिक विद्यालय सुखचैनाका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरसियाका अनुसार पर्सामा हाल कक्षा दश र कक्षा ५ को पुस्तक अभाव देखिएको छ। उनको विद्यालयमा कक्षा दशमा ९६ जना विद्यार्थी छन् तर पचीस सेट किताब मात्र उपलब्ध भएको छ। विशेषगरी कक्षा दशको अतिरिक्त गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली तथा कक्षा ५ को अङ्ग्रेजी विषयको चरम अभाव देखिएको छ। पर्सामा प्रावि, आधारभूत, मावि र उच्च मावि गरी कुल तीन सय ३५२ वटा र १२० वटा निजी विद्यालय सञ्चालित छ। यस विषयमा पर्साका पुस्तक बिक्रेताहरूसँग बुझ्दा जनक शिक्षा केन्द्रले पुस्तक छपाइ गरी पठाउने काममा ढिलाइ गरेकोले पुस्तक आपूर्तिमा समस्या भइरहेको पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष नरेश रौनियारले बताए। दुई सातापछि पुस्तक सहज उपलब्ध हुने पर्साका पुस्तक बिक
आगलागीमा चार बस स्वाहा
प्रस, वीरगंज, १५ वैशाख/ वीरगंज, बसपार्कमा आज साँझ आगलागी हुँदा चारवटा बस जलेर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। साँझ ६ बजेतिर बसपार्क नजिकै रहेको इन्डिका बडीबिल्डर्स कारखानामा इलेक्ट्रिक सर्ट भएर आगलागी हुँदा ना.३ ख ६०८०, ना.५ ख ५७५१, २७३, ना. ४ ख ७४२१ नं.को बस जलेर नष्ट भएको छ । नयाँ निर्माण भइरहेको तथा मरम्मतका लागि राखिएको बसलगायत अन्य सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट रु २ करोड बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। वीरगंज र कलैयाबाट आएको वारुणयन्त्र, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको थियो । बसपार्कदेखि ५ मिटर दूरीमा रहेको वारुणयन्त्र आउन समय लागेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका थिए। आगलागीबाट भएको क्षतिकोे विवरण प्रहरीले सङ्कलन गरिरहेको छ।
बढ्दो सुक्खायामसँगै ठोरीमा खानेपानीको समस्या
प्रस, ठोरी, पर्सा, १५ वैशाख/ बढ्दो सुक्खायामसँगै ठोरीका विभिन्न वडामा खानेपानीको समस्या देखिएको छ। ठोरीका विभिन्न वडाको माथिल्लो भेग चौतारा, सरस्वतीनगर, हनुमाननगर, गौतमनगर, रोजीनगरको डाँडा र गहिरोटोल क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या देखिएको हो। विशेषगरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चुरे क्षेत्र पानीको मुहान रहेका यस क्षेत्रका बासिन्दाले पाइपलाइनबाट पिउने पानी उपभोग गर्दै आएका छन्। बढदो सुख्खायामसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्येक वर्ष पिउनेपानीको समस्या झेल्नुपरेको छ। जेनतेन पाइपलाइनबाट खोलाको पानी ल्याइए पनि सुरक्षित पिउनेपानीबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। जङ्गली जनावरले फोहोर बनाएका र पातपतिङ्गर कुहिएर फोहोर भएको खोलाको पानी पाइपबाट ल्याएर पिउनुपरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अमुवा खोलाबाट पाइपमार्फत् ल्याइएको पानी सुख्खायाम शुरु भएसँगै मुहान सुक्दा समस्या उत्पन्न भएको चौताराका स्थानीय ध्रुव क्षत्रीले जानकारी दिए। पिउने पानीको समस्या भएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा दुई किलोमिटर टाढाबाट समय खर्चेर खोलाको पानी बोकेर पिउन बाध्य हुनुपरेको बुलबु
नीलु पटेल गोलीकाण्डमा पतिकै संलग्नता
प्रस, परवानीपुर, १५ वैशाख/ चैत २९ गते राति २ बजे आप्mनै घरमा सुतिरहेकी वीरगंज –१७ पिपराकी नीलु पटेलमाथि भएको गोली प्रहार घटनामा निजकै पतिको संलग्नता रहेको पाइएको छ। टाउकोमा एउटा गोली लागी गम्भीर घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको २४ वर्षीया नीलुको हत्यामा उनका पति धीरेन्द्र पटेलकै हात रहेको पर्सा प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। “नीलुमाथि भएको गोली प्रहारमा उनकै पतिको संलग्नता छ”–पर्सा प्रहरीका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए–“सबै अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ, दुई–तीन दिनमैं प्रमाणसहित पत्रकार सम्मेलन गरी सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।” नीलुको चैत ३० गते राति ८ बजे वीरगंज नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। घटना भएलगत्तै, नीलुका पति र उनको परिवारजनले गम्भीर घाइते भएकी नीलुलाई प्रहरीको सहयोगमा अस्पताल पु¥याएका थिए। प्रहरीले नीलुको पतिलाई नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक मुद्दा चलाई अनुसन्धान थालेको थियो। चाँडै धीरेन्द्र माथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी कारबाई चलाउने पर्सा प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
सासूको हत्या अभियोगमा बुहारी पक्राउ
प्रस, पोखरिया, १५ वैशाख/ नाठोसँग मिलेर सासूको हत्या गरेको कसूरमा प्रहरीले पोखरिया नपा–७ बस्ने सोहिता देवीलाई पक्राउ गरेको छ। जिप्रका, पर्साका प्रनाउ चक्रराज जोशीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सोहिता देवीले धुरी दास तत्वासँग मिलेर सासू सीतादेवी तत्वाको हत्या गरेको पाइएकोले निजहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएका छन् । घटना अनुसार वैशाख १ गते सीतादेवी तत्वाको मृत्यु भएको बुहारी सोहिता देवीले गाउँमा हल्ला पैmलाएकी थिइन्। उनले धुरी दास तत्वालगायत व्यक्तिको सहयोगमा सोही दिन सासूको दाहसंस्कार पनि गरिन्। प्रहरीलाई समेत खबर नगरेर सोहिताले सासू कालगतिले मरेको हल्ला पैmलाएर दाहसंस्कार गरेकी थिइन्। नारायणघाटमा पति सुनील दास तत्वा र ससुरा सीदयाल तत्वा काम गर्ने र मृत्युको खबर सुनेर घर फर्कदा दाहसंस्कार भइसकेको थियो। घटनाको १३ औं दिन गाउँलेहरूले सीतादेवीको शव बुहारीले दर्शन नगराएको गुनासो गरेपछि हतारमा दाहसंस्कार गरिएको र गाउँलेलाई पनि मृत्युपश्चात् दर्शन नगराइएको कुराले शङ्का लागेर छोरा र ससुराले सोधखोज गरेका थिए। कुरा प्रहरीसम्म पुगेपछि कटी बेस क्याम्पले इप्रका पोखरियालाई खबर ग¥यो। घटनामा संलग्न र
वीरगंज–काठमाडौं रूटमा सञ्चालित टाटासुमोले भाडा बढी लिएको गुनासो
प्रस, वीरगंज, १५ वैशाख/ वीरगंज–काठमाडौं चल्ने टाटा सुमोले यात्रुसँग बढी भाडा लिने गरेको गुनासो आएको छ। वैशाख १ गते नयाँ वर्षभन्दा केही दिन पहिलेदेखि वीरगंज–काठमाडौं सञ्चालन हुने टाटासुमोले निर्धारित रु ५३५ भन्दा २ सय बढी लिने गरेको यात्रीहरूले गुनासो गरेका छन्। वीरगंजबाट दैनिक ६० भन्दा बढी टाटासुमो सञ्चालन हुन्छ। नयाँ वर्षको अवसरमा भाडामा टाटासुमोहरू बढी गएको कारण सुमोको अभाव भएर यात्रुहरूसँग बढी भाडा लिने गरिएको थियो। अहिले सिस्नेरीदेखि बल्खुसम्म टाटासुमो गुडने बाटो खराब भएको र टाटासुमो निर्धारित समयमा आइ नपुग्दा सो अवसरको फाइदा उठाउँदै सुमो सञ्चालन गर्नेहरूले बढी भाडा लिने गरेको पाइएको छ। यसबारे जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रमुख प्रनि रवीन्द्र भट्टसँग बुझ्दा उनले गुनासो आएको तर घटनास्थलमा कुनै पनि यात्रुले बढी भाडा तिरेको स्वीकार नगरेकोले कारबाई गर्न नसकिएको बताए। उनले केही स्थानमा टाटासुमो रोकेर यात्रीहरूसँग तोकिएको भाडा लिए–नलिएकोबारे सोध्दा कसैले पनि बढी भाडा लिएको गुनासो नगरेको कारण कारबाई प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए।
विशाल मेमोरियल गोल्डकपमा सङ्कटा र आर्मी भिडदै सङ्कटाको मनोबल उच्च, आर्मीले बदला लिने
प्रस, परवानीपुर, १५ वैशाख/ विशाल मेमोरियल फाउन्डेशनद्वारा वीरगंजमा सञ्चालित टुबोर्ग प्रथम विशाल मेमोरियल गोल्डकपको फाइनलमा सिएमजी सङ्कटा क्लब काठमाडौं तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौं भिडने भएका छन्। नारायणी रङ्गशाला, वीरगंजमा शनिवार हुने फाइनल खेलमा सङ्कटा क्लबको खेलाडीहरूको मनोबल उच्च रहेको आज सम्पन्न प्रिम्याच पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन्। सङ्कटाका टीम कोच सल्यान खडगीले अहिलेसम्मको फाइनलको इतिहास हेर्दा सङ्कटा र आर्मीको चारपटक भिडन्तमा तीनवटा उपाधि सङ्कटाले जितेको हुनाले भोलि हुने प्रतियोगिता पनि आप्mनो पक्ष्Fमा रहने दाबी गरे। उनले तीनपटकको फाइनल आर्मीलाई हराएको हुनाले आप्mनो क्लबको मनोबल उच्च रहेको बताए। सङ्कटाका टीम क्याप्टेन विक्रम लामाले प्रतियोगितामा दर्शकको साथ पनि पाएकोले फाइनलमा आप्mनो टीमको मनोबल उच्च रहेको बताए। उनले उच्च मनोबलका साथ खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिने हुनाले उपाधि आप्mनो हातमा आउने प्रबल सम्भावना रहेको दाबी गरे । त्रिभुवन आर्मी क्लबका टीम कोच नवीन न्यौपानेले विगतमा त्रिभुवन आर्मीले सङ्कटासँग फाइनलमा चार प्रतियोगितामा एक प्रतियोगिता जि
उमाशङ्कर द्विवेदी भरत श्रेष्ठ १ यो निश्चित मान्नुहोस्–जसको सहायक भीम र अर्जुन छन्, यो सम्पूर्ण पृथ्वी आज उसैको हो। यो सुनेर दुर्योधनले भन्यो–महाराज, तपाईं न आत्तिनुहोस्। हाम्रोबारे फिक्री गर्ने कुनै कुरा छैन। हामी पर्याप्त शक्तिमान छौं र शत्रुहरूलाई सङ्ग्राममा परास्त गरिछाडने छौं। जति बेला इन्द्रप्रस्थबाट अलि टाढा वनवासी पाण्डवहरूको नजिक भारी सेनाको डप्mफाका साथ श्रीकृष्ण, कैकयराज, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न र पाण्डवहरूका साथी अन्यान्य महारथि भेला भएका थिए, त्यति बेला यी जम्मैजनाले तपाईंका तथा समस्त कौरवहरूका बडो निन्दा गरेका थिए। तिनीहरू सम्पूर्ण कुटुम्बका साथ तपाईंको नाश गर्न उन्मुख भएका थिए तथा पाण्डवहरूलाई उनीहरूको राज्य फर्काउन सम्मति दिइरहेका थिए। यो कुरा मेरो कानमा परेपछि बान्धवहरूको नाश हुने आशङ्का देखेर मैले भीष्म, द्रोण र कृपाचार्यलाई यसको सूचना दिएको थिएँ। त्यति बेला मलाई लागेको थियो कि अब पाण्डवहरू नै राजसिंहासनमा बस्नेछन्। मैले उनीहरूसित भनेको थिएँ कि कृष्णले त हामी जम्मैको सर्वथा उच्छेद गरेर युधिष्ठिरलाई नै कौरवहरूको एकछत्र राजा बनाउन चाहन्छन्। यस्तो स्थितिमा भन्न
एउटा आदर्श बकपत्र
सञ्जय मित्र अहिले म मौन साक्षी छु। म अदृश्य बसेको छैन तर भूमिका मेरो दृश्य छैन। यसको अर्थ अदृश्य भूमिका छ भन्ने पनि होइन। हुनत मलाई साक्षीसमेत भन्न मिल्दैन। मबाहेक सबै सक्रिय हुनुपर्छ र आलोपालो भएको देखिरहेको छु। मेरो भूमिका केही पनि नहुने तर मूक दर्शकजस्तो बनिरहनुपर्ने कारण के हो भने यो एउटा स्टाफ बैठक हो। म अतिथि होइन। स्टाफ पनि होइन। सबैले मलाई चिनेका छन्। ममाथि यति विश्वास छ कि यहाँ मैले सुनेको र नसुनेको बराबर छ। मैले कतै केही भन्ने होइन र भने पनि खास केही फरक पर्दैन भन्ने पनि होला। स्टाफ बैठक सम्पन्न भएपछि कार्यालय प्रमुख अर्थात हाकिम साबले मलाई कतै लैजानुपर्नेछ। हाकिम मेरा साथी हुन् यसकारण पनि स्टाफ बैठकमा मेरो उपस्थिति कतिपयको मनमा बिझाएको भए पनि मलाई कसैले बाहिर गएर बस्न नभनेको हुन सक्छ। हाकिमको पुच्छर हुनु पनि कहिलेकाहीं फाइदै हुन्छ। मलाई पुच्छर हुनुको आत्मगौरव अहिले प्राप्त भएको छ। सम्भवतः मलाई सुनाउनलाई पनि होला। स्टाफ बैठकमा अलि आदर्शका कुरा बढी नै भएको छ। मूर्तिवत् बसेको छु। समय निरन्तर बितिरहेको छ। हाकिम साबले सबैमा खोटमाथि खोट देखाइरहेका छन्। अलि दबेको स्वरमा
चन्द्रकिशोर ०६२/०६३ को जनान्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाको अधिकार कटौती ग¥यो। अन्तरिम संविधानले राजालाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राख्यो र संविधानसभा पहिलोको घोषणाले राजसंस्थालाई बिदा ग¥यो। जनान्दोलनको सफलतासँगै राजसंस्थालाई शिथिलीकरण गरियो, अन्तरिम संविधानले निगरानीमा राख्यो र संविधानसभाले बिदाइको विधिवत् घोषणा ग¥यो। राजकाजमा राजा नभएको दश वर्ष भइसक्यो। यसरी शान्त राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो। जनान्दोलनमार्फत् जनताको विजयसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह झुके र जनताको सर्वोपरिताको शासन शुरु भयो । राजाबिनाको शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्र होइन। विश्वमा राजा नभएका थुप्रै देश छन् र तर ती सबैमा जनता विजयी भएको छैन। जनता विजयी भएको अवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रको मूल्य नबोकेको गणतन्त्रले जनताको सम्मान, सुरक्षा र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैन। गणतन्त्र भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो, गण भनेको आखिर जनता नै हो। त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरियो। गणतन्त्रका तŒव राजतन्त्रको कुनै पनि स्वरूपको अनुपस्थिति गणतन्त्रको आधारभ
साहित्य किन र कसका लागि
– समीर पाख्रिन साहित्य समाजको ऐना हो। समाज कस्तो छ ? समाज के चाहन्छ ? समाजले के गर्दैछ ? समाज कतातिर मोडिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु छ भने साहित्य पढे पुग्छ। समाजले के गर्नुहुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा प्रथमतः साहित्यले नै निर्देश गर्ने गरेको देखिएको छ। समाजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर डो¥याउन साहित्य एउटा सशक्त माध्यम बन्दै आएको उदाहरण प्रशस्त देख्न पाइन्छ। विश्व इतिहासमा घटित ठूला–ठूला क्रान्ति, राजनैतिक परिवर्तनहरूमा साहित्यको अग्रणी भूमिका रहेको पाइन्छ । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा राणाशासन विरुद्ध जनान्दोलन होस् वा त्यसपछिका २०१५, २०१७, २०२८, २०३६ र २०४६ र २०६२ सालका राजनैतिक उतार चढावहरूमा देशका साहित्यकारहरूको अहम् भूमिका रहेको जगजाहेर छ। देशमा जबजब राजनैतिक सङ्कट देखापर्छ जनतालाई दिशाबोध गराउने काममा कवि,साहित्यकारहरू नै अग्र स्थानमा रहेका देखिन्छन्। कुनै पनि आन्दोलन सफल वा विफल पार्न साहित्यकारहरूको भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्तैन। यसैले पनि साहित्य समाजका लागि एउटा बौद्धिक खुराक भएको छ। देशको वर्तमान राजनैतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, राजनैतिक दलहरूको गतिविधि र भूमिकाबार
स्वार्थमा कतिसम्म अन्धो हुन्छ मान्छे
वैद्यनाथ ठाकुर हामी सबैले सुनेकै कुरो हो– ‘प्रेम अन्धो हुन्छ।’ प्रेममा फसेपछि केही पनि हेर्दैन मान्छेले। प्रेम मान्छेसँग होस् वा पैसासँग। प्रेम त आखिर प्रेम नै हो । यसै साता वीरगंजका स्थानीय समाचार पत्रिकाहरू, एफएम रेडियोहरू तथा कान्तिपुर दैनिकमा समेत एउटा समाचारले निकै ठाउँ पायो। पठनपाठनमा नाम चलेको सरकारी स्कूल सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय वीरगंज चिनी कारखाना, पिपरा, बहुअरीको विद्यालय प्रशासनले आप्mनो विद्यालयको गाडीचालकलाई ६ महिनाको लागि वीरगंजकै एक निजी संस्थागत विद्यालय ज्ञानदा एकेडेमीमा काज सरुवा गरेको छ। सरकारी विद्यालयको कर्मचारी निजी विद्यालयमा कसरी सरुवा भयो ? के कारणले सरुवा भयो ? सरकारी विद्यालयहरूमा यति धेरै लापरवाही तथा भ्रष्टाचार हुनुको कारण के हो ? दिन प्रतिदिन, सरकारी शिक्ष्Fामाथि शैक्ष्Fिक माफियाहरूको नियन्त्रण किन बढिरहेको छ ? यतिबेला यस्ता प्रश्नहरूमा निधार खुम्च्याउन बाध्य भएका छन् स्थानीय अभिभावकहरू । यसै साताको शुरुमा मधेसी दलहरू पनि चुनावमा भाग लिने समाचार आयो । सरकार र मधेसी दलको छलफलबाट दुई चरणमा वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते चुनाव हुने कुरा आयो। मधेसमा मात्
झन्डै मिल्नमिल्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसवादी दलको सहमति फेरि कुइरोको काग बनेको छ। सरकारले प्रदेश नं २ लगायतका ११ जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गर्न पुनर्संरचनाका लागि कार्यविधि पुनरावलोकन प्राविधिक समिति खटाएको थियो। समितिले वीरगंजमा छलफल चलाएपछि कामले होइन, मुखले वीरगंजको उन्नति र प्रगति खोज्ने राजनीतिक दलहरूको अनुहारमा मुस्कान छरिनै लागेको बेला अस्थिर मनस्थितिको सरकारले समितिलाई फिर्ता बोलायो। समितिको छलफलमा वीरगंजलाई महानगरपालिका बनाउने र पर्सा जिल्लामा ४ वटा थप गाउँपालिका बनाउने चर्चा चलेको थियो। यसैबीच प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पुनरावलोकनको विरोध गरेपछि सरकारले तत्काल समितिलाई फिर्ता बोलायो । छलफलको समाचार लेख्न पनि नभ्याउँदै समिति फिर्ता गएको समाचार पनि पुछारमा छाप्नुपर्ने समाचारपत्रहरूलाई विवशता आइप¥यो । अब महानगरपालिका बन्ने र गाउँपालिका थपिने कुरा त परै जाओस् निर्वाचन नै हुने हो कि होइन भन्ने आशङ्का जन्मेको छ। किनकि एक भाइ हिङ भए भान्सै नपस्ने अर्को हिङ नभए भागै नबस्ने असमञ्जस लामो समयदेखि मधेसवादी दल र नेकपा एमालेबीच चलिरहेको छ।
२०७४ वैशाख १५ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
बेलायतको राहत सामग्री पटेलनगरका आगलागी पीडितलाई
प्रस, परवानीपुर, १४ वैशाख/ वीरगंज–२१ पटेलनगरका आगलागी पीडितहरूको लागि बेलायतबाट पठाइएको राहत सामग्री पुगेको छ। जनकपुरका सरोज रायको संस्था पहल नेपालको सक्रियतामा रोटरी क्लब अफ काठमाडौंले बेलायतबाट पठाएको आगलागी पीडितहरूको लागि राहत सामग्री आज वितरण गरेको हो। रोटरी क्लबले ७ परिवारलाई एक्वा बक्स प्रदान गरेको छ। २१ घरपरिवारमध्ये बढी क्षति हुने जादोलाल पटेल, नरेश पटेल, धर्मदेव पटेल, प्रभु राउत, पन्नालाल राउत कुर्मी, मुकेश पटेल, हरेराम पटेललाई एक्वा बक्स प्रदान गरिएको हो। एक्वा बक्समा खानेकुरा, लत्ताकपडा, बच्चाको लागि खेलौना, भाँडाकुँडा, बिस्कुटलगायत आधारभूत सामग्री रहेको छ। वीरगंजका सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पहल नेपालसँग राहतको लागि माग गरेका थिए। सोही क्रममा राहत प्राप्त भई वितरण गरिएको उनले बताए। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस, पर्साका नेता एवं परवानीपुरका व्यवसायी हबीब मियाँले ५० हजार बराबरको राहत सामग्री आज एक कार्यक्रमबीच वितरण गरेका छन्। उनले २२ घर परिवारलाई ३० किलो चामलको १ थान बोरा, साडी, धोती १–१ थान, आलु, प्याज, नुनलगायत सामग्री वितरण गरेका थिए। रा
अस्थायी शिक्षकको धर्ना जारी
प्रस, परवानीपुर, १४ वैशाख/ गत चैत महिनामा शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न खोलेको विज्ञापनविरुद्ध देशभरका अस्थायी शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। सोही क्रममा पर्साका अस्थायी शिक्षकहरू पनि जिल्ला शिक्ष्Fा कार्यालय, पर्सामा धर्ना कार्यक्रममार्पmत् विरोध तथा प्रदर्शन शुरु गरेका छन्। अस्थायी शिक्ष्Fक नेताहरूका अनुसार यति लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अस्थायी शिक्ष्Fकहरूलाई सोभैm बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै विगतमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए तर शिक्ष्Fा ऐनको आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्ष्Fकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा गोल्डेन हेन्डसेक प्रणालीमार्पmत् व्यवस्थापन गर्दै नेपालको शिक्ष्Fा नीति अघि बढने सम्झौता भएको थियो। सोही अनुरूप चुनाव घोषणा भएपछि पदपूर्तिको लागि शिक्ष्Fक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्यो। उता नेपाल सरकार, शिक्ष्Fा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्ष्Fकहरूबीच सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा पनि सरकारले जितेको छ। अस्थायी शिक्ष्Fकहरू पराजित हुँदै चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि गरिएको विज्ञापन आचारसंहिताविपरीत भएकोले सर्वोच्चमैं शिक
सिम्रौनगढमा चुनावको चहलपहल
प्रस, सिम्रौनगढ, १४ वैशाख/ सिम्रौनगढ नगरपालिकामा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधी तीव्र पारेका छन्। पछिल्लो समय सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएपछि सिम्रौनगढ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधि अझ तीव्र बनाएका छन्। सिम्रौनगढ नगरपालिकाको टोल टोलमा दिनहुँ राजनीतिक दलहरूको पार्टी प्रवेश, कार्यकर्ता भेटघाट, भेला, छलफल, सङ्गठन विस्तारजस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन्। यस्तै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिम्रौनगढ नगरपालिकाको नगर प्रमुखका लागि चुनाव लडन चाहने आकाङ्क्षीहरूको नाम पनि चर्चामा आउन थालिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट स्वतन्त्र सेनानी भागवतप्रसाद यादवका छोरा विजयशङ्कर यादव र अर्का नेता किशोरीप्रसाद जयसवालको नाम चर्चामा छ। यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट गगनदेवप्रसाद कु्शवाहा र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट श्यामकिशोर प्रसाद यादवको नाम पनि मेयरका लागि चर्चामा छ। यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता शेख मोतिमको नाम चर्चामा छ। मेयरका लागि अनवर अन्सारी र जङ्
दुर्घटनैदुर्घटना ४ को मृत्यु, थुप्रै घाइते
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ पर्सा र बारामा भएको छुट्टाछुट्टै घटना दुर्घटनामा चारजनाको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। ड्राइपोर्ट परवानीपुर सडकखण्डको बहुअरी गाउँ नजिकै मोटरसाइकल तथा लरी ट×«क आपसमा ठोकिंदा दुईजनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा वीउमनपा–२२ मनियारी बस्ने २५ वर्षीय रमेश यादव र त्यही टोलका २३ वर्षीय श्रवण यादव रहेका छन्। ड्राइपोर्टबाट परवानीपुर जाँदै गरेको ना ३ ख २७२० नम्बरको लरी गाडी र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ३१ प ७९६५ नम्बरको मोटरसाइकल गए राति ९ बजे एकआपसमा जुध्दा मोटरसाइकल सवार दुवैजनाको घटनास्थलमैं मृत्य भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजनाको शव परिवारले बुझी दाहसंस्कार गरेका छन्। यसैबीच जगरनाथपुर गाउँपालिका, जानकीटोलामा पानीमा डुबेर दुई वर्षीय नाबालकको मृत्यु भएको छ। स्थानीय हरेन्द्र नुनिया महतोको दुई वर्षीय छोरा अभय महतोको मृत्यु भएको हो। आज बिहान ७ बजे घर नजिकैको धारामा खेल्दै गरेका अभय, धाराको पानी जमेको खाडलमा डुबेर मरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। यसैबीच पथलैया हेटौडा सडकखण्ड अन्तर्गत अमलेखगंजमा
विशाल मेमोरियल गोल्डकपको फाइनलमा सङ्कटा र आर्मी भिड्ने
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ वीरगंजमा सञ्चालित टुबोर्ग प्रथम विशाल मेमोरियल गोल्डकपको फाइनलमा सङ्कटा क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिडने भएका छन्। सङ्कटाले बुधवार नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने बिहीवार सम्पन्न दोस्रो फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले जनजागृति युवा क्लबलाई ३ गोलले पराजित गरी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। जर्सी नं. ३० का खेलाडी जर्ज प्रिन्स कार्कीले १ गोल, जर्सी नं. १० का भरत खवासले १, जर्सी नं. १६ का दिलीप लामाले १ गोल गरेका थिए।
आन्दोलन बेतुकको हुनुहुन्न
अस्थायी शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा छन् । ०५५ सालदेखि स्थायी माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने अभिप्रायले सरकारले ०६१ सालमा साढे १२ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियोे । सरकारले देशभरमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा एकमुस्ट दरबन्दी सृजना गरेर विज्ञापन माग गरोस् र सो अनुरूप परीक्षामा सहभागी भएकाहरूको हकमा अनुत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकले पाउने सुविधा उपलब्ध गराएर बिदा गर्न माग गरिएको थियो । सरकारले परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेको हकमा कुनै सुविधा तय गरेको छैन तर परीक्षामा सहभागी हुनु अगावै राजीनामा दिनेलाई भने उपदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकमा ५ वर्षदेखि १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई आधा महिना बराबरको तलब उपदान बापत दिने, १० देखि १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरूलाई एक महिना बराबरको उपदान र १५ वर्षमाथि सेवा अवधि पुगेका अस्थायी शिक्षकलाई डेढ महिना बराबरको तलब सुविधा उपदानबापत दिने जनाएको छ । ०६१ सालपछि ०७३ सालको अन्त्यमा सरकारले शिक्षा नियमावलीमा तोकिए अनुसार ०७५ सालदेखि अस्थायी शिक्षकको प्रावधान अन्त्य गर्ने नीति लागू गर्
श्रीमन्नारायण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार यदि नेकपा एमाले सामु प्रत्येक पाइलामा नतमस्तक हुँदै आएको छ भने वर्तमान सरकारसमक्ष पटक–पटक अनुनय विनय गरेर निरीहताको पराकाष्ठासम्म पुग्ने काम मधेसवादी दलहरूबाट हुँदै आएको छ। वर्तमान सरकार यदि १२० किमी प्रतिघण्टाको गतिले संविधान संशोधन गर्ने साहस जुटाउँछ भने नेकपा एमालेको एउटा सानो धम्कीबाट डराएर २४० किमीको गतिमा आप्mना घोषणा र प्रतिबद्धता फिर्ता पनि लिने गरेको छ। नेकपा एमालेको धम्की सामु वर्तमान सरकारको निरीहता गरुड सामु सर्पको हुने गरेको हविगतजस्तै छ। एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीका सुप्रिम नेता रहिसकेका र पहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्ति एउटा प्रतिपक्षी दलको धम्कीबाट यति बढी डराउने छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। मधेसवादी दलहरूको अवस्था दन्तविहीन र विषविहीन सर्पजस्तो हुन गएको छ। जब कुनै राजनीतिक दल आप्mनो सैद्धान्तिक निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट विमुख हुन थाल्दछ, उसको अवस्था सा¥है दयनीय हुन पुग्दछ । मधेसवादी दलहरूको वर्तमान अवस्था निरीह एवं निर्बल याचकको जस्तो हुन
आर्थिक विकासको मेरुदण्ड सङ्घीयता
शीतल महतो नेपालका लागि सङ्घीयता नयाँ अभ्यास हो। नेपालको संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार केन्द्र वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार पनि हो। त्यसैले अहिले हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय निकायको भन्दा फरक हो। किनभने स्थानीय तहमा जित्ने जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय सरकार चलाउँछन्। सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकारबाट शासन गर्ने होइन, स्थानीय तहबाट शासन गर्ने हो। स्थानीय चुनावपछि देशले नयाँ फडको मार्छ र स्थानीय तहको विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा आम नेपालीको छ। चुनावपछि उत्तरदायी किसिमको जनप्रतिनिधिको उदय हुने र आप्mनो भविष्यका लागि योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, भएका कमी–कमजोरीलाई आफैंमा छलफल गरेर त्यसको निकास दिइने र सामाजिक न्याय गर्नेछ। पहिला्े केन्द्रस्तरबाट बनाइएका नीतिहरू त्यति राम्रो र व्यावहारिक हुन सकेका थिएनन्। फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता नीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। जनताको विचारलाई आत्मसात् गर्ने परिस्थिति नरहेको हुनाले कामकारबाईप्रति उनीहरू जिम्मेवार भएनन्। तर अबका दिनमा स्था
भारतसँग व्यापार घाटा नियन्त्रणका उपायहरू
विश्वराज अधिकारी भारतसँग हुने व्यापारमा नेपालले वर्षौंदेखि घाटा बेहोर्दै आएको छ। अर्थात् भारतसँग नेपालको व्यापार अति नै असन्तुलित छ। नेपाल–भारत व्यापार भारतको पक्षमा मात्र छैन, नेपालसँग रहेको व्यापारको आप्mनो बलियो स्थितिलाई राजनैतिक सौदेबाजीको अचुक तिरको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको राष्ट्रिय एवं केन्द्रीय राजनीतिमा दबाब सृजना गर्न वा नेपालले गर्ने ठूला–ठूला आन्तरिक वा बाह्य निर्णयमा प्रत्यक्षरूपले हस्तक्षेप गर्न पनि भारतले आप्mनो बलियो व्यापारिक स्थितिलाई प्रयोग गरिरहेको छ। हामीले ऊर्जा, औषधी र खाद्यान्न नेपाललाई नदिने हो भने नेपालीहरू यातायातविहीन भएर, भोकभोकै बसेर, बिमारीले छटपटिनु पर्नेछ भनी भारतले प्रत्येक पल नेपालका नेताहरूलाई बोध गराइरहेको हुन्छ। र बेलाबेलामा, मधेस आन्दोलनको बहानामा, यी वस्तुहरूको आपूर्ति बन्द पनि गर्दै आएको छ। २०४७ सालपछिको स्थितिमा त नेपालका नेताहरूले केन्द्रीय राजनीतिमा आप्mनो स्थान बलियो बनाउन, सत्ता प्राप्त गर्न, चुनाव जित्न र शक्तिमा निरन्तर बसिरहन भारतको शरणमा जानुपर्ने भएको छ। नेपालका नेताहरूले भारतीय शक्ति केन्द्रहरूलाई दाम राखेर ढोग्न
सङ्घीयताको सवाल र आर्थिक विकासका पूर्वाधार
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव सङ्घीयता अपरिहार्य भए पनि सङ्घीय राज्यमा आर्थिक पूर्वाधार तयार हुनु त्यतिकै आवश्यक छ। एकात्मक शासन भएको व्यवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटोन्मुख बनाएको थियो त्यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा नपरोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ। किनभने विकास गतिविधि ठप्प छ। गौरवका योजनाहरू निराशाजनक छन्। महँगी मात्र बढेको छैन, ग्याँसलगायत आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा राज्य असहाय बनेको छ। सरकारी सेवा प्राप्तिमा पनि समस्या छ । वैदेशिक सहायताका आयोजना प्रभावित छन्। लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिएको त छ। यी सबैको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास प्रति दलहरूको असंवेदनशीलता हो। यस्तो दुरवस्था सङ्घीय नेपालमा आयो भने निकै अप्mठ्यारो पर्न सक्छ। यसर्थ विगतको चुनौतीप्रति सजग हुँदै विगतको अनभुवलाई मार्गदर्शन बनाउँदै अगाडि बढनुपर्छ। सङ्घीयता मुख्य गरी तीन अवधारणामा विकसित भएको छ। पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई समेटेर बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने। दोस्रो हो छुट्टिन खोजेका राज्यहरूलाई एकतामा बाध्न अधिकारसम्पन्न बनाउने। तेस्रो हो जातीय, क्षेत्रीय विविधता एवं अ